ကစားတဲ့နေရာနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ ကျောနံပါတ်ပိုင်ရှင် ကစားသမားများ (၂)
26 Oct 2018 . 4:04 PM
ဘောလုံးအားကစား စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းရဲ့ ကျောနံပါတ်တွေက ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်။ ဂိုးသမားက စလို့ ရှေ့တန်းအထိ (၁၊၂၊၃၊၄) အစဉ်အလိုက် သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ မော်ဒန်ဘောလုံးလောကရောက်မှ နံပါတ်တွေက အထူးအဆန်းတွေဖြစ်လာပြီး ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ဆိုရင် အေစီမီလန်မှာ ကစားတုန်းက နံပါတ် (၉၉) ၊ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို Ronaldinho ဆိုရင်လည်း (၈၄) ၀တ်ဆင်ခဲ့သလို ဘာလိုတယ်လီ Balotelli က နံပါတ်(၄၅)ကို အင်တာမီလန်၊ မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်၊ အေစီမီလန်တို့မှာ ၀င်ဆင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကစားတဲ့နေရာနဲ့ မသတ်ဆိုင်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား ကျောနံပါတ်တွေ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် အပိုင်း(၁)အပြီး အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
ဒပ်ဖီ Shane Duffy (နံပါတ် -၇)
တိုက်စစ်ကစားသမားတွေက ခံစစ်ကစားသမားတွေရဲ့ နံပါတ်ကို ၀တ်ခဲ့ပေမယ့် အခု ဒပ်ဖီကတော့ ပြောင်းပြန်ပါ။ ဘရိုက်တန်နောက်ခံလူ ဒပ်ဖီဟာ မြောက်အိုင်ယာလန် လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ မဆီမဆိုင် နံပါတ်(၇)ဂျာစီ ၀တ်ပြီး ကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဂလင်းဂျွန်ဆင် Glen Johnson (နံပါတ်-၈)
လီဗာပူးလ်နောက်ခံလူဟောင်း ဂလင်းဂျွန်ဆင်ကတော့ လီဗာပူးလ်မှာ ကစားခဲ့တုန်းက တွဲဖက်ကစားဖူးတဲ့ စတီဗင်ဂျရတ် Steven Gerrard ကို အားကျလို့လားတော့ မသိဘူး စတုတ်စီးတီးအသင်းရောက်တော့ ကျောနံပါတ်(၈)ဂျာစီကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူ့ရဲ့ စတုတ်စီးတီးအသင်းလည်း တန်းဆင်းသွားခဲ့ရပါပြီ။
ဘူလာရုဇ် Khalid Boulahrouz (နံပါတ်-၉)
ဘောလုံးသမိုင်းမှာ ကျောနံပါတ် (၉)ဆိုတာက ဂန္ထ၀င်နံပါတ်လို့တောင် သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ ဒီနံပါတ်နဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေက မနည်းမနောပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကျောနံပါတ်ကို နောက်ခံလူက ၀တ်ဆင်လိုက်တော့ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရတော့ပါဘူး။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ၂၀၀၆ ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒတ်ခ်ျနောက်ခံလူ ဘူလာရုဇ်ဟာ ကျောနံပါတ်(၉)ကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု မရခဲ့ဘဲ သူ့နောက်ပိုင်း ဆစ်ဒ်ဝဲလ် Steve Sidwell ၊ တောရက်စ် Fernando Torres တို့ ဆက်ဝတ်ခဲ့ပေမယ့် ဘူလာရုဇ်ရဲ့ ကံမကောင်းမှုတွေက အဲဒီကစားသမားတွေကိုပါ ရိုက်ခတ်သွားသလား မသိပါဘူး၊ နှစ်ယောက်စလုံး ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့ပါဘူး။
ဂါးလက်စ် William Gallas (နံပါတ်-၁၀)
ကိုယ်နဲ့ ဘာမှမအပ်စပ်တဲ့ နံပါတ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ဂါးလက်စ်က ထိပ်ဆုံးလို့ ပြောရမယ်။ မဆီမဆိုင် ကျောနံပါတ် (၁၀)တောင် ၀တ်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒီနံပါတ် (၁၀)ဆိုတာကလည်း အာဆင်နယ် ဂန္ထ၀င် တိုက်စစ်မှူးလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ဒင်းနစ်ဘားကမ့် Dennis Bergkamp ၀တ်ခဲ့တဲ့ နံပါတ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကလည်း အဲဒီနံပါတ်ကို တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးဦးဆီ ပေးရမယ့် ဂါးလက်စ်ကို ၀တ်ခွင့်ပြုတာက အံ့သြစရာပါပဲ။
မီဟိုင်းလိုဗစ် Sinisa Mihajlovic (နံပါတ် -၁၁)
ယူဂိုဆလားဗီးယား ဂန္ထ၀င်ကြီး မီဟိုင်းလိုဗစ်ကတော့ တခြားကစားသမားတွေနဲ့ မတူဘဲ နံပါတ်(၁၁)နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမားတော့ မဟုတ်ဘူး။ မီဟိုင်းလိုဗစ် ကစားတဲ့နေရာက ဘယ်နောက်ခံ ဒါမှမဟုတ် Centre-back နေရာတွေမှာ ကစားခဲ့တာ။ ပြင်းထန်တိကျတဲ့ ဖရီးကစ်ကန်ချက်တွေနဲ့အတူ မီဟိုင်းလိုဗစ်ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နောက်ခံလူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဒီကစားသမားတွေကတော့ ကစားတဲ့နေရာနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ ကျောနံပါတ်ပိုင်ရှင် ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Article ကို ဖတ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတ ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် . .
ကစားတဲ့နရောနဲ့ မအပျစပျတဲ့ ကြောနံပါတျပိုငျရှငျ ကစားသမားမြား (၂)
ဘောလုံးအားကစား စတငျဖှံ့ဖွိုးလာတဲ့ ခတျေဦးပိုငျးမှာ ဘောလုံးအသငျးတဈသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျတှကေ ရိုးရှငျးလှနျးပါတယျ။ ဂိုးသမားက စလို့ ရှတေ့နျးအထိ (၁၊၂၊၃၊၄) အစဉျအလိုကျ သတျမှတျပေးလိုကျတာပါပဲ။ မျောဒနျဘောလုံးလောကရောကျမှ နံပါတျတှကေ အထူးအဆနျးတှဖွေဈလာပွီး ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ရျောနယျလျဒို Ronaldo ဆိုရငျ အစေီမီလနျမှာ ကစားတုနျးက နံပါတျ (၉၉) ၊ ရျောနယျလျဒငျဟို Ronaldinho ဆိုရငျလညျး (၈၄) ဝတျဆငျခဲ့သလို ဘာလိုတယျလီ Balotelli က နံပါတျ(၄၅)ကို အငျတာမီလနျ၊ မနျစီးတီး၊ လီဗာပူးလျ၊ အစေီမီလနျတို့မှာ ဝငျဆငျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျကစားတဲ့နရောနဲ့ မသတျဆိုငျဘဲ ထူးထူးခွားခွား ကြောနံပါတျတှေ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ အပိုငျး(၁)အပွီး အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
ဒပျဖီ Shane Duffy (နံပါတျ -၇)
တိုကျစဈကစားသမားတှကေ ခံစဈကစားသမားတှရေဲ့ နံပါတျကို ဝတျခဲ့ပမေယျ့ အခု ဒပျဖီကတော့ ပွောငျးပွနျပါ။ ဘရိုကျတနျနောကျခံလူ ဒပျဖီဟာ မွောကျအိုငျယာလနျ လကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ ကစားခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ မဆီမဆိုငျ နံပါတျ(၇)ဂြာစီ ဝတျပွီး ကစားခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ဂလငျးဂြှနျဆငျ Glen Johnson (နံပါတျ-၈)
လီဗာပူးလျနောကျခံလူဟောငျး ဂလငျးဂြှနျဆငျကတော့ လီဗာပူးလျမှာ ကစားခဲ့တုနျးက တှဲဖကျကစားဖူးတဲ့ စတီဗငျဂရြတျ Steven Gerrard ကို အားကလြို့လားတော့ မသိဘူး စတုတျစီးတီးအသငျးရောကျတော့ ကြောနံပါတျ(၈)ဂြာစီကို ရှေးခယျြခဲ့တယျ။ အခုတော့ သူ့ရဲ့ စတုတျစီးတီးအသငျးလညျး တနျးဆငျးသှားခဲ့ရပါပွီ။
ဘူလာရုဇျ Khalid Boulahrouz (နံပါတျ-၉)
ဘောလုံးသမိုငျးမှာ ကြောနံပါတျ (၉)ဆိုတာက ဂန်ထဝငျနံပါတျလို့တောငျ သတျမှတျလို့ရတယျ။ ဒီနံပါတျနဲ့ ကြျောကွားခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူးတှကေ မနညျးမနောပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုကြောနံပါတျကို နောကျခံလူက ဝတျဆငျလိုကျတော့ ဘယျလိုမှ ခံစားလို့မရတော့ပါဘူး။ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ၂၀၀၆ ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒတျချြနောကျခံလူ ဘူလာရုဇျဟာ ကြောနံပါတျ(၉)ကို ဝတျဆငျခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှု မရခဲ့ဘဲ သူ့နောကျပိုငျး ဆဈဒျဝဲလျ Steve Sidwell ၊ တောရကျဈ Fernando Torres တို့ ဆကျဝတျခဲ့ပမေယျ့ ဘူလာရုဇျရဲ့ ကံမကောငျးမှုတှကေ အဲဒီကစားသမားတှကေိုပါ ရိုကျခတျသှားသလား မသိပါဘူး၊ နှဈယောကျစလုံး ဇာတျသိမျးမလှခဲ့ပါဘူး။
ဂါးလကျဈ William Gallas (နံပါတျ-၁၀)
ကိုယျနဲ့ ဘာမှမအပျစပျတဲ့ နံပါတျဝတျဆငျခဲ့သူတှထေဲမှာ ဂါးလကျဈက ထိပျဆုံးလို့ ပွောရမယျ။ မဆီမဆိုငျ ကြောနံပါတျ (၁၀)တောငျ ဝတျလိုကျသေးတယျ။ အဲဒီနံပါတျ (၁၀)ဆိုတာကလညျး အာဆငျနယျ ဂန်ထဝငျ တိုကျစဈမှူးလို့ သတျမှတျရမယျ့ ဒငျးနဈဘားကမျ့ Dennis Bergkamp ဝတျခဲ့တဲ့ နံပါတျ။ အာဆငျနယျအသငျးကလညျး အဲဒီနံပါတျကို တိုကျစဈကစားသမားတဈဦးဦးဆီ ပေးရမယျ့ ဂါးလကျဈကို ဝတျခှငျ့ပွုတာက အံ့သွစရာပါပဲ။
မီဟိုငျးလိုဗဈ Sinisa Mihajlovic (နံပါတျ -၁၁)
ယူဂိုဆလားဗီးယား ဂန်ထဝငျကွီး မီဟိုငျးလိုဗဈကတော့ တခွားကစားသမားတှနေဲ့ မတူဘဲ နံပါတျ(၁၁)နဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သူဟာ ကှငျးလယျကစားသမားတော့ မဟုတျဘူး။ မီဟိုငျးလိုဗဈ ကစားတဲ့နရောက ဘယျနောကျခံ ဒါမှမဟုတျ Centre-back နရောတှမှော ကစားခဲ့တာ။ ပွငျးထနျတိကတြဲ့ ဖရီးကဈကနျခကျြတှနေဲ့အတူ မီဟိုငျးလိုဗဈဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး နောကျခံလူတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ .. ဒီကစားသမားတှကေတော့ ကစားတဲ့နရောနဲ့ မအပျစပျတဲ့ ကြောနံပါတျပိုငျရှငျ ကစားသမားတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ Article ကို ဖတျပွီး ပရိသတျတှေ ဗဟုသုတ ရနိုငျလိမျ့မယျလို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ . .